प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको सुझाव: 'अयोध्या' होइन, कोरोना र कालापानीमा ध्यान दिउँ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 'अयोध्या' तिर ध्यान नमोडी कोरोना र कालापानीमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्- 'प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन दुई कर्तव्य- कोरोना र कालापानी !' उनले संसदबाट पारित नक्सामा हक कायम गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहल थाल्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
भानुजयन्तीको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राम जन्मिएको अयोध्या नेपालमै भएको र भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गरि विवाद खडा गरेको बताएका थिए । उनले 'अयोध्या भारतमा नभइ वीरगञ्जदेखि पारी ठोरीमा भएको' बताएपछि सामाजिक संजालमा यसले तीव्र प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुले समेत यसमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । भारतीय मिडियाले पनि यो समाचारलाई प्रसारण गरेका छन् ।
यसतर्फ लक्ष्यित गर्दै प्रवक्ता शर्माले 'अयोध्या' तिर ध्यान नमोड्न आग्रह गरेका छन् । उनको ट्विटमा भनिएको छ- १) हृदयमा छँदैछन् `राम', चिन्ता राजु सदाहरुको गरौं ! २) `अयोध्या´तिर ध्यान नमोडौं, संसदबाट पारित नक्सामा हक कायम गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहल थालौं !'
उनले सम्झाउने कर्तव्य आफ्नो भएको र बुझाउने जिम्मेवारी नेकपाको भएको पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १७:१७
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले कोभिड-१९ का बिरामीको 'प्लाज्मा थेरापी' विधिबाट उपचार गर्नेबारे अनुसन्धान गर्न कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको भएका बिरामीसँग रगत दान गर्न आव्हान गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड-१९ नियमित ब्रिफिङमा मंगलबार प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड-१९ भएर निको भइसकेका बिरामीहरुलाई प्लाज्मा डोनेट गर्न परिषद्ले‌ आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
परिषद्ले‌ कोभिड-१९ उपचारका लागि तोकिएको अस्पतालको संयुक्त संलग्नतामा कोभिडका बिरामीलाई ‘कन्भेलेसमेन्ट प्लाज्मा’ दिई उपचार गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न रक्तदाताहरुको माग गरेको हो ।
प्रवक्ता गौतमले कोभिड-१९ लागेर निको भइसकेको इच्छुकलाई परिषद्‌मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । यसका लागि कार्यालयको समयावधि १० देखि ५ मा इच्छुकले ०१–४२५४२२० एक्सेटेन्सन नम्बर १२४ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् भने इमेलमा पनि सम्पर्क गर्न सक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्लाज्मा थेरापी रगतको प्लाज्मामा पाइने ‘एन्टिबडी’ का आधारमा शरीरमा कुनै भाइरसविरुद्ध प्रतिरोध क्षमतालाई विकसित गर्ने प्रक्रिया हो । कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफैं त्यससँग लड्न थाल्छ र त्यसलाई समाप्त पार्न ‘एन्टिबडी’ बनाउँछ । जसरी एन्टिबडी भाइरसलाई समाप्त गर्न सफल हुन्छ, बिरामी पूर्णरूपले निको हुन्छ ।
एउटा स्वस्थ व्यक्तिबाट बिरामी व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिस्थापन गर्न सकिने मान्यताअनुसार ब्लड प्लाज्मा थेरापी गरिन्छ । यो उपचारका लागि ‘एस्पेरेसिस’ विधिबाट रगत निकालिन्छ । यो विधिअनुसार रगतबाट मात्र प्लाज्मा वा प्लेटेलेट्सजस्ता अवयवलाई निकालेर बाँकी रगतलाई पुन: दाताको शरीरमै फिर्ता गरिन्छ । यसअन्तर्गत कोभिड–१९ रोग निको भइसकेका व्यक्तिको रगतबाट ‘प्लाज्मा’ निकालेर कोरोनाले स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेका व्यक्तिमा चढाई उपचार गरिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी खोप नबनेसम्मको अवस्थामा प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसले संक्रमित बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार सावित हुन सक्छ । हालसम्मका अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ रोगबाट निको भएका एक जना स्वस्थ व्यक्तिको शरीरबाट निकालिएको प्लाज्माले अन्य चार व्यक्तिको उपचार गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १७:०६